भारतलाई हराएर च्याम्पियन बन्ने अर्को अवसर | Hamro Khelkud
भारतलाई हराएर च्याम्पियन बन्ने अर्को अवसर
नेपालले २८ वर्षअघिको चमत्कारलाई आज फेरि दोहोराउन सक्ला ? बंगलादेशमा सन् १९९३ मा आयोजना भएको तत्कालिन छैटौं दक्षिण एसियाली महासंघिय खेलकुद (साफ) हालको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को च्याम्पियन बनेर नेपाली टोली स्वदेश फर्केको थियो । क्षेत्रिय स्तरमा नेपाल च्याम्पियन बनेको त्यो नै अन्तिम पटक थियो ।
दक्षिण एसियाको सर्वाधिक सफल र बलियो टोली भारतलाई हराएर नेपाल त्यति बेला च्याम्पियन बनेको थियो । छैटौं साग भन्दा झण्डै ६ महिना अघिबाट सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपको १३ औं संस्करण सम्म आइपुग्दा नेपाली टोली च्याम्पियन बन्न सकेको छैन । पहिलो पटक यसै पाली नेपाल फाइनल पुग्दा फेरि भारतकै सामना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल र भारतीय टोलीबीच क्षेत्रिय स्तरमा भएको अहिले सम्मको त्यो एक मात्र फाइनल हो । नेपाल सामू पुरानै सफलतालाई निरन्तरता दिने अवसर छ भने भारतलाई फाइनल जित्नै बराबरी गर्ने मौका छ ।
त्यति बेला निर्धारित र थप समयमा २–२ को बराबरीपछि टाइब्रेकरमा ४–३ ले भाग्यशाली रहँदै नेपाल च्याम्पियन बनेर फर्केको थियो । के यसपटक पनि नेपाल च्याम्पियन बनेर फर्कला ? विजय दशमीको भोली पल्ट नेपाली फुटबल टोलीले समर्थकलाई अर्को ठूलो खुसी देलान् । पक्कै अधिकांश नेपालीको खेलाडीको नजर माल्दिभ्समा नेपाली समय अनुसार राती ८:४५ बजे सुरु हुने फाइनलमा हुनेछ । नेपालको आशा छ नेपाल यसपटक च्याम्पियन बनेर फर्कनेछ ।
बुधबार नेपाल र भारतले आफू अनुकुल नतिजा निकाल्दै फाइनल भिडन्त पक्का गरेका थिए । नेपालले बंगलादेशसँग १–१ बराबरी खेल्दै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । अर्कोतर्फ च्याम्पिनयसिपमा अपराजित भएको भारतले आयोजक माल्दिभ्सलाई ३–१ को नतिजा निकाल्दै अन्तिम दुईको यात्रा तय गरेको थियो । भारत सात पटकको च्याम्पियन टोली हो । साफ च्याम्पियनसिपमा भने नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो । २ जित र २ बराबरीका साथ भारत ८ अंकसहित शीर्ष र ७ अंकसहित नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेका छन् ।
छैटौं सागमा टाइब्रेकरमा हराएपछि नेपालले २०१३ मा स्वदेशमा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई २–१ ले हराएको थियो । नेपालले नियमित समयमा भारतलाई हराएको त्यो नै पहिलो खेल हो । त्यसयता नेपालले भारतलाई हराउन सकेको छैन । भारतमाथि जित निकाल्दै पहिलो उपाधि जित्ने मौका यसपटक नेपालसँग छ ।
१९९३ पछि नेपाली राष्ट्रिय सिनियर टोलीले दक्षिण एसियाको क्षेत्रिय स्तरको प्रतियोगिता जितेको छैन । सागमा पहिला सिनियर टोलीले नै खेल्ने गर्थ्यो । नवौं साग देखि भने यू २३ टोलीले साग खेल्दै आएको छ । सागको १२ औं संस्करणमा नेपालले भारतलाई हराएर नै उपाधि जितेको थियो ।
महिलातर्फ पनि साग र साफ च्याम्पियनसिपका अधिकांश संस्करणमा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । त्यसमा भने नेपालले अहिले सम्म भारतलाई हराउन सकेको छैन । नेपालमा २०१५ मा आयोजना भएको यू १९ साफमा पनि नेपालले फाइनललाई नै हराएर उपाधि जितेको थियो ।
यो पनि : अलमुताइरीलाई फाइनलमा प्रतिबन्ध, साफले आफ्नै नियम मिच्यो